Kedu asụsụ ndị bụ isi a na-asụ na Vietnam? - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Kedu asụsụ ndị bụ isi a na-asụ na Vietnam?
Ha na-asụ Spanish na Vietnam?
A ka na-asụ French na Vietnam?
Ha na-asụ Mandarin na Vietnam?
Gịnị bụ aha mbụ Vietnamese kacha ewu ewu?
Kedu ka Vietnam dị nchebe?
Kedu asụsụ kacha dịrị Vietnamese nso?
Kedu asụsụ kacha ewu ewu na Vietnam?
Ekwesịrị m ịmụ Thai ma ọ bụ Vietnamese?
Vietnam ọ ka bụ ndị Kọmunist?
Philippines na Vietnam bụ ọkà okwu Spanish akụkọ ihe mere eme na mba ndị na-asụ French, mana iri afọ ole na ole gara aga, Bekee gafere naanị asụsụ. Ugbu a, ya na Francophonie, Vietnam nke 1% nke ndị bi na ya bụ ndị na-asụ French na-enweta ndị na-eto eto.
Na 2018, e mere atụmatụ na e nwere ihe dị ka 600,000 ndị na-asụ French nke ọma na Vietnam, na-aza ntakịrị n'okpuru 1% nke ndị bi na ya. Ka o sina dị, Vietnam ka bụ obodo Francophone kasị ukwuu na Eshia ma bụrụ onye zuru oke na Òtù Internationale de la Francophonie (OIF).
Vietnamese nwere ike ịsụ Chinese? N'okwu mkpokọta: Ee. Ha nwere ike, taa enwere ọtụtụ ndị Vietnamese nwere ike ịsụ Chinese dịka ha nwere ike ịsụ Bekee, French, Russian, German, Japanese, Korean. Ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ha amụta asụsụ mba ọzọ ndị ahụ nke ọma.
Kacha nkịtị bụ Le, Pham, Tran, Ngo, Vu, Do, Dao, Duong, Dang, Dinh, Hoang na Nguyen – Vietnamese dakọtara Smith. Ihe dị ka pasent 50 nke ndị Vietnamese nwere aha ezinụlọ Nguyen. Aha e nyere, nke pụtara ikpeazụ, bụ aha a na-akpọ mmadụ, bụ aha aha kwesịrị ekwesị bu ya ụzọ.
Nke a dị mkpa: Azịza ngwa ngwa: Kedu mgbe Thailand ghọrọ obodo?
Na mkpokọta, Vietnam bụ obodo dị oke nchebe ịga njem na ya. Ndị uwe ojii na-ejidesi ya nke ọma na a na-enwekarị akụkọ gbasara mpụ, ohi ma ọ bụ mwakpo mmekọahụ. Aghụghọ na nsogbu dị, ọkachasị na Hanoi, HCMC na Nha Trang (na n'ọkwa dị nta na Hoi An).
Asụsụ Vietnamese bụ nke ngalaba Viet-Muong nke ezinụlọ Mon-Khmer. A na-asụ asụsụ Mon-Khmer na mpaghara sitere na steeti Assam nke India na ọdịda anyanwụ ruo Vietnamese n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Ọ bụ ezinụlọ asụsụ nke ala ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia.
Vietnamese bụ asụsụ gọọmentị; A na-enwewanye mmasị na Bekee dị ka asụsụ nke abụọ. A na-asụkwa French, Chinese, Khmer na asụsụ ugwu dị iche iche. N'etiti pasent 85 na pasent 90 nke ndị bi na Vietnam bụ agbụrụ Vietnamese.
Asụsụ abụọ ahụ dị mma na ndị pụrụ iche mana M na-adụ ọdụ ka ị mụọ Vietnamese. Enwere akụkụ Latin ndị ọzọ na ya nke na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na mkpụrụedemede nwere mkpụrụedemede na Bekee. Na Thai, echeghị m na ọ dị mfe maka na o nweghị akwụkwọ ozi ị maara. Na mgbakwunye, enwere mkpụrụedemede/ akara dị mgbagwoju anya.
Socialist Republic of Vietnam bụ obodo nwere otu. Enyere iwu iwu steeti ọhụrụ n'April 1992, dochie ụdị 1975. Emeghachiri ọrụ etiti nke otu Kọmunist n'akụkụ niile nke gọọmentị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọha mmadụ.
Edemede bara uru 0
Kedu ihe kpatara ndị Thai ji na-abụ ụbọchị ọmụmụ obi ụtọ na bekee?
Ị nwere ike na-abụ Happy Birthday na Thai? Ọ ga-adị ka nke a ka edere ya
Ị jụrụ: Gịnị bụ ebumnobi nke agụmakwụkwọ anụ ahụ na Philippines?
Ebumnuche bụ isi nke agụmakwụkwọ anụ ahụ bụ: ịzụlite ikike moto dị ka ike, ọsọ,
Kedu akụkụ Malaysia bụ Selangor?
Selangor, mpaghara ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Malaysia (Malaya), nke nwere akụkụ nke ala ala mmiri dị n'ụsọ oké osimiri.
Thai basil ọ na-atọ ụtọ dị ka basil?
Basil Thai bụ ụdị basil nke sitere na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ọ nwetara
Kedu ọdụ ụgbọ mmiri ole Vietnam nwere?
Vietnam nwere ọdụ ụgbọ mmiri 320 nke 163 bụ ọdụ ụgbọ mmiri mba ụwa. Otu n'ime ha bụ
Kedu obodo US ụgbọ elu Singapore na-efe efe?
Ọdụ ụgbọ elu obodo obodo United States Los Angeles Los Angeles International ọdụ ụgbọ elu Newark Newark nnwere onwe
Ajụjụ a na-ajụkarị: Myanmar ọ dị nso na China?
Singapore ọ bụ obodo mepere emepe ka ọ bụ na ọ bụghị?
Kedu asụsụ a na-asụkarị na Indonesia?
Enwere m ike isi na Cavite gaa Manila?
Ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ụlọ na Singapore?
Gịnị bụ fossils mmadụ kacha ochie na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia?
Ole ndị bụ ndị ahịa nke ụgbọ elu Philippine?